Mayelana Nathi - Qingdao Yingzhicai Packaging Co.Ltd
Sineminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoniukukhiqiza izikhwama zokupakisha zepulasitiki
I-Qingdao Yingzhicai Packaging Co.Ltd, esedolobheni laseQingdao, esifundazweni saseShandong, eyasungulwa ngo-1996, ehlanganisa ama-square metres angu-9800, igxile ekukhiqizeni izikhwama zokupakisha zepulasitiki, izikhwama ze-spout, uphawu olunezinhlangothi ezintathu, izikhwama ze-aluminium, izikhwama ze-aluminium foil, i-stereo (uqobo). -esekelayo) izikhwama, izikhwama ezimise okukhethekile, ezihlanganisa nokufutha ifilimu.ukuphrinta, ukuqamba, ukukhiqiza izikhwama, nemikhiqizo esetshenziswa kabanzi ezimbonini ezifana nobisi, isiphuzo, ukudla, isiphuzo, izimonyo, imikhiqizo yokuwasha.
Ngesitifiketi sokuphrinta nesitifiketi sokuphrinta ikhodi.
Inkampani inohlelo oluphelele noluzwakalayo lokuphatha ikhwalithi
Iphasile i-IsO9001-2008 kanye ne-QS Food Safety Production Certification
"Ikhwalithi iyimpilo, Izinzuzo zitholakala kubaphathi"
I-Qingdao Yingzhicai Packaging Co.Ltd igcizelela umgomo othi "qulity is life, izinzuzo ezitholakala kubaphathi", ngokwethembeka, amandla kanye nekhwalithi yomkhiqizo enconywa kakhulu amakhasimende embonini.
Kukhona ochwepheshe kanye nezinduku ze-Q ezinolwazi olucebile, olukwazi ukuqinisekisa imikhiqizo yekhwalithi ephezulu kanye nokuhlanganisa nezidingo zamakhasimende ngokulawula izinto zokwakha, ukuhlola, ukucubungula, imikhiqizo eqediwe kanye nokudiliva.
Inkampani isungule uhlelo olusebenzayo noluphelele lokuhlinzeka amakhasimende, futhi ihlinzeka ngezinsizakalo ezididiyelwe ezihlanganisa ukubonisana kwezobuchwepheshe, ukumodeliswa kwemikhiqizo, ukuklama kochwepheshe kanye nomhlahlandlela wokupakisha.
Zonke izinduku zenkampani zizimisele ukubambisana namakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe ngesimo sethu sengqondo esifudumele nesiqotho, izindlela ezingcono kakhulu zesevisi nezinhle kakhulu.
Lwela ukudala isevisi engcono yamakhasimende
Imininingwane inquma impumelelo noma ukwehluleka
Izinketho zenza ikusasa
Thumela Amazwe Nezifunda
1.NguMnu.John Magel Germany,Ibhizinisi elide neQingdao Yingzhicai Package.my ithimba livakashele ifekthri yabo liqhuba i-oda lami.yebo, bayifektri echwepheshile.kumnandi ukukhuluma nabo.Senze ibhizinisi izikhathi eziningi manje ngijabule kakhulu njalo thola izimpahla ezisezingeni eliphezulu nezinsiza ezinhle.
2.NguMnu.Abe Romana USA, Njengesakhamuzi saseMelika esiqhuba ibhizinisi eShayina udaba lokuqala engangikhathazeke ngalo kwakuwukuxhumana njengoba leso sithiyo singakhungathekisa kakhulu ukubhekana nethimba labadayisi kube ngokuphambene.
3.Ron Matt USA,Kufike izikhwama zezikhwama nemishini namuhla,Konke kubukeka kukuhle futhi kuzifaka emsebenzini,Isikhwama sesikhwama sibukeka sisihle kakhulu,Nemishini nayo isesimweni esihle,Yazisa isevisi yakho yobungcweti.
4.NgoNks, u-Julian Paterson Australia, bekumnandi ngempela ukuvakashela e-China okokuqala, ngiyalithanda idolobha, i-Qingdao, lihle kakhulu.Uhlelo lwami kuleli dolobha ukuvakashela umphakeli wami we-Yingzhicai Package.